Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny fizahantany ao Jamaika dia mitazona lahateny lehibe momba ny fampiasam-bola
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett (ankavia) dia manolotra ny dika mitovy amin'ny gazetiboky Global Tourism Resilience and Crisis Management Center an'ny Jamaikana ho an'ny filoha lefitry ny DP World, Mohammed Al Maullem. Ny fampisehoana dia natao vao tsy ela akory izay tamin'ny fiafaran'ny andianà fihaonambem-pivarotana fitsangantsanganana avo lenta niaraka tamin'ny DP World, orinasa lozisialy lehibe misy firenena maro any Etazonia.
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, vao haingana dia namarana andiana fivoriana fampiasam-bola manan-danja amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny DP World, orinasa lehibe lozisialy multinational miorina ao Emirà Arabo Mitambatra (UAE).
Nandritra ny telo andro nisesy nivoriana dia nisy ny adihevitra matotra momba ny fampiasam-bola ao amin'ny Port Royal Cruise Port sy ny mety hisian'ny homeporting.
Teo an-databatra ho an'ny fifanakalozan-kevitra ihany koa dia ny fampivoarana foibem-pitaterana lozisialy, fitateram-pitaterana maro-modaly Vernamfield ary aerotropolisy, ary koa ny fampiasam-bola hafa momba ny fotodrafitrasa.
Hitohy ato ho ato ireo dinika ireo.
“Tena faly aho manambara fa tena nahomby ny fihaonanay tamin'ny iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra amin'ny seranan-tsambo sy lozisialy an-dranomasina, DP World. Nandritra ny telo andro nisesy nihaonanay dia nifanakalo hevitra matotra momba ny fampiasam-bola ao amin'ny Port Royal Cruise Port sy ny mety hividianana trano izahay. Niresaka momba ny fampivoarana ivon-toeram-pitaovana lozisialy, fitateram-pitaterana multimodaly Vernamfield ary aerotropolisy, ary koa ny fampiasam-bola hafa momba ny fotodrafitrasa, ”hoy i Bartlett.
Ny filohan'ny DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, tamin'ny alàlan'ny iraka, filoha lefitry ny DP World, Mohammed Al Maullem, dia naneho fahalianana. ao Jamaika ary nampita ny fiarahabana ny praiminisitra, ny tena Hon. Andrew Holness.
Bartlett sy ireo mpanatanteraka ao amin'ny DP World dia hanohy ireo fifanakalozan-kevitra ireo ato ho ato miaraka amin'ny Port Authority of Jamaica sy ny Minisiteran'ny Fandrosoana ara-toekarena sy ny famoronana asa.
Ny DP World dia manam-pahaizana manokana amin'ny logistika entana, serivisy an-dranomasina, fampandehanana ny seranan-tsambo ary faritra ara-barotra malalaka. Niforona tao amin'ny 2005 izy io taorian'ny fikambanan'ny Dubai Ports Authority sy Dubai Ports International. Ny DP World dia mitantana kaontenera 70 tapitrisa eo ho eo izay entin'ny sambo manodidina ny 70,000 isan-taona, izay mitovy amin'ny 10% eo ho eo amin'ny fifamoivoizana eran-tany kaontin'ny seranan-tsambo 82 an-dranomasina sy an-tanety any amin'ny firenena 40 mahery. Hatramin'ny taona 2016, ny DP World dia mpandraharaha seranan-tsambo eran-tany voalohany indrindra, ary nanomboka teo dia nahazo orinasa hafa niakatra sy nidina ny rojo sanda.
Nandritra ny UAE, Minisitra Bartlett sy ny ekipany Hihaona amin’ny solontenan’ny sampandraharahan’ny fizahantany eto amin’ny firenena ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ny fampiasam-bola amin’ny fizahantany avy any amin’ny faritra; hetsika fizahantany any Afovoany Atsinanana; ary ny fidirana amin'ny vavahady ho an'i Afrika Avaratra sy Azia ary ny fanamorana ny fiaramanidina. Hisy ihany koa ny fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny DNATA Tours, ilay mpandraharaha fitsangatsanganana lehibe indrindra ao UAE; mpikambana ao amin'ny Jamaikana am-pielezana any UAE; ary fiaramanidina lehibe telo any Afovoany Atsinanana - Emirates, Ethid ary Qatar.
Avy any Emirà Arabo Mitambatra, ny minisitra Bartlett dia handeha ho any Riyadh, Arabia Saodita, izay hitenenany amin'ny faha-5 taonan'ny Future Investment Initiative (FII). Ny FII amin'ity taona ity dia ahitana resadresaka lalina momba ny fahafahana fampiasam-bola vaovao eran-tany, ny famakafakana ny fironana indostrialy, ary ny tambajotra tsy manam-paharoa eo amin'ireo CEO, mpitarika manerantany ary manam-pahaizana. Hanatevin-daharana azy ny senatera, Hon. Aubyn Hill amin'ny maha-minisitra tsy misy portofolio ao amin'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-toekarena sy ny famoronana asa (MEGJC), manana andraikitra amin'ny Rano, Tany, Fandraharahana Outsourcing (BPO), ny Fahefana ara-toekarena manokana ao Jamaika ary ireo tetikasa manokana.